Morondava: dahalo sarimbavy tratran’ny zandary | NewsMada
Morondava: dahalo sarimbavy tratran’ny zandary
Dahalo iray tratran’ny zandary tany amin’ny farit’i Morondava iny, izay nahabe resaka ny olona any an-toerana, hatrany anaty tambajotra sosialy. Noheverina fa lehilahy izy io kanefa nisy nono. Lehilahy ihany anefa raha ny filazan’ny olona azy. Nasehon’ny mpitandro filaminana vahoaka mihitsy izy ity tany an-toerana.
Tranga hafakely tsy fahitan’ny olona firy ary nahagaga ny rehetra. Anisan’ny dahalo raindahiny anefa izy io, ary taorian’ny fanafihana nitranga tany an-toerana ny nahazoana azy. Notazonina ary hanaovana fanadihadiana ilay dahalo io.
Anisan’ny mbola mirongatra ny asan-dahalo any amin’iny faritra Menabe iny. Maro ny asan-dahalo ary mampikaikaika ny olona mihitsy izany. Manao izay tratry ny eriny ny zandary, ary misy mihitsy aza ny maty am-perinasa. Andrasana ny fampitaovana sy ny karazana fampisehoana nataon’ny mpitandro filaminana teny Mahamasina amin’ny ady amin’ny asan-dahalo.